Whoscall - Caller ID ကို & Block ကို | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » Whoscall - Caller ID ကို & Block
Whoscall - Caller ID ကို & Block ကို APK ကို
Whoscall ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖော်ထုတ်နှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းများအတွက်အကောင်းဆုံး App ဖြစ်ပါတယ်။
Whoscall နှင့်အတူ, သငျသညျချက်ချင်းမပေးသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်စာရင်းထဲမှာခေါ်ဆိုမှုများနှင့် SMS ကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Whoscall သင်တို့ကိုလည်း spam များကို, Scan ကို, telemarketers, robocalls နှင့်ပိုပြီးများကဲ့သို့မလိုလားအပ်သောနံပါတ်များနှင့်စာသားများပိတ်ဆို့ကူညီပေးသည်။ ယခုသင်၏ဖုန်းဆက်သွယ်ရေးကာကွယ် Start နှင့်သာယာသောတောင်းဆိုအတွေ့အကြုံကိုခံစားပါ။ ★ 2013 ၏အကောင်းဆုံး Apps ကပတစ်ခုမှာ Google တွင် 8 နိုင်ငံများတွင် Play ★
★ "အသုံးပြုသူများ spam များကိုခေါ်ဆိုမှုများရှောင်ကြဉ်ပါကူညီပေး" -TechCrunch ★
ဝင်လာသောအမည်မသိဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်အမည်မသိအခြားအသုံးပြုသူများ၏သတင်းပေးပို့ tags များမှတစ်ဆင့်တစ်မှိတ်အတွင်း SMS ကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျ, အင်တာနက်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကို, ငါတို့ပြည့်စုံကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒေတာဘေ့စများ၏နောက်ခံသတင်းအချက်အလက်ကိုဖေါ်ထုတ်။ သူစိမျးမှမင်္ဂလာပါဆင့်ဆိုရမည်မှာ,
• ခေါ်ရန်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု / Robocall ပိတ်ပင်တားဆီးမှု / SMS ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှု
တစ်ဦးနှောင့်ယှက်-အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုအတွေ့အကြုံကိုသေချာစေရန်အသိဥာဏ်ကို spam, Scan ကို, telemarketers, robocalls နှင့် SMS ကိုစာသားများပိတ်ဆို့။ Spam ဖြရန်မင်္ဂလာပါလို့ပြောဘယ်တော့မှမ!
• သန်း 700 ကျော်ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အတူဒေတာဘေ့စ
လူတိုင်းအတွက်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှုကွန်ယက်ကိုဖန်တီးရန်မသိသောနံပါတ်များကိုများအတွက် name ကိုသတင်းပို့ပါ။ သငျသညျအခြားအသုံးပြုသူများသတင်းပို့ခြင်းဖြင့် spam များကို, Scan ကို, telemarketers, robocalls နှင့် SMS ကိုကျမ်းကိုရှောင်ကြဉ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
• အော့ဖ်လိုင်းဒေတာဘေ့စ (Lightning ဖော်ထုတ်ခြင်း)
(ဒီ function ကိုသာ database ထဲတွင်ဂဏန်းများအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်)
• Whoscall ကတ်: မိမိစိတ်ကြိုက်မိုဘိုင်းနာမကိုအမှီကဒ်
အခြားသူများမှပြသနိုင်ဖို့သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင် Whoscall Card ကိုဖန်တီးပါ။ တောင်းဆိုနေစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့အထောက်အထားအခြားဘက်ခြမ်းမှပြသနေသည်အဖြစ် Whoscall ကတ်မိုဘိုင်းနာမကိုအမှီ card လိုမျိုးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖွကွေားခံရဖို့နဲ့လူကိုအလွယ်တကူသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးစာရင်းထဲကိုသင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
• တစ် Post ကိုအောင်: သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုအလိုအလျှောက်အခြားသူများအားမိတ်ဆက်ပြသပါလိမ့်မည်
Whoscall ကတ်သစ် post ကို function ကိုနှင့်အတူသငျသညျနျူကလီးယားသန့်စင်ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူအရေးကြီးသောမက်ဆေ့ခ်ျ post နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ပို့စ်များမီးမောင်းထိုးပြထားသည်ခေါ်ဆိုမှုရဲ့အဆုံးမှာအခြားဘက်ခြမ်းမှပြသပါလိမ့်မည်။ ပင်လွဲချော်ခေါ်ဆိုခအတွက်, သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏နှင့်မိတ်ဆက်ပြသပါလိမ့်မည်။
** ဒီအော့ဖ်လိုင်း databases ကိုသာအောက်ပါနိုင်ငံများ (ထိုင်ဝမ်, ဂျပန်, ဟောင်ကောင်, ကိုရီးယားနှင့်အမေရိကန်, ဘရာဇီး, မလေးရှားစသည်တို့ကို) တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်
•က Android v4.0 သို့မဟုတ်မြင့်မားသောဗားရှင်း
Real-time lookup ပြုလုပ်နေဘို့လိုအပ်တည်ငြိမ်အင်တာနက်•။
• 3rd ပါတီ SMS ကို app များကိုအသုံးပြုခြင်းပျက်ကွက်ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြစ်ပေါ်စေပေလိမ့်မည်။
•ဘက်ထရီထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး app များကိုအသုံးပြုခြင်းစွမ်းဆောင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
•က Android 4.4 မှစတင်ကာ Google က developer များအနေဖြင့် SMS ကို / MMS ကိုခွင့်ပြုချက်ရုတ်သိမ်းခဲ့သည်။ ကြောင့်ထိုအချက်ကိုရန်, Whoscall အန်းဒရွိုက်ဗားရှင်းအထက်တွင် 4.4 နှင့်အဘို့ကို SMS / MMS ကိုပိတ်ဆို့နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အင်္ဂါရပ်ပိတ်ဆို့ခြင်းခေါ်ဆိုခထိခိုက်နစ်နာမဟုတ်ပါဘူး။
•ကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီစက်ပစ္စည်းအတွက်စိတ်ကြိုက်ခံရဖို့ရှိသည် Whoscall ဟာ dual sim card ဖုန်းစနစ်ကန့်အသတ်မှ။ သင့်ရဲ့ device ကိုအောက်ပါစာရင်းထဲတွင်မပါရှိလျှင်, Whoscall ကြောင်းဖုန်းပေါ်မှာ operating အချို့အခက်အခဲများရှိနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့အဆင်မပြေမှုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြသည်။
HTC ကတဦးတည်း Dual-802d (က Android 4.2.2)
Samsung ရဲ့ Galaxy Y ကိုပါ GT-S6102 (က Android 2.3.6)
Samsung ရဲ့ Galaxy အနိုင်ရရှိ i8552 (က Android 4.1.2)
Samsung ကဂရန်းဆိုပြီးပါ GT-I9082 (က Android 4.1.2)
Redmi 2013023 (က Android 4.2.2)
MTK-mini3 (က Android 4.2.2)
မင်္ဂလာပါအသုံးပြုသူများ! ကျွန်တော်တို့ကိုလိုကျနာပါ: Facebook ကစာမျက်နှာ: facebook.com/whoscall
Twitter ပေါ်တွင်မင်္ဂလာပါဆိုရမည်: https://twitter.com/Whoscall_APP
1 ။ ပေါ့ပ်ပေးတဲ့ dialog စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာ
2 ။ fix အကြောင်းကြားစာပြဿနာကိုဖယ်ရှားမပေးနိုငျ
Whoscall - Caller ID ကို & Block
18.47 ကို MB
10,000,000 + downloads,
blocker Call - ...
ခေါ် WHO က 10 ...
Caller ID ကို - ဖုန်း ...
tellows - ဖုန်းခေါ်ဆိုသူ…
စီအိုင်အေ - Caller ID ကို & ...
ဇန်နဝါရီလ 21, 2016 မှာ 7: 58 နံနက်
ဟူး Sharma က says:
နိုဝင်ဘာလ 3, 2014 မှာ 8: 01 ညနေ
ငါ၏အမိုဘိုင်းဖြစ်ပါသည်: - ချော်ရည်မျက်ဝန်း-356
ဇူလိုင်လ 21, 2014 မှာ 6: 15 နံနက်
ဇူလိုင်လ 21, 2014 မှာ 6: 18 နံနက်
မေလ 26, 2014 မှာ 1: 34 ညနေ
ဧပြီလ 12, 2014 မှာ 5: 09 ညနေ
Lisa maire cawley says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 4, 2013 မှာ 5: 11 နံနက်
ဘယ်လိုကိုယ့် whot ရကြဘူး
Kush တောင်တန်းတွေနဲရိုင် says:
ဇန်နဝါရီလ 25, 2014 မှာ 12: 41 နံနက်
အောက်တိုဘာလ 15, 2013 မှာ 8: 29 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 15, 2013 မှာ 8: 27 ညနေ
bushra abdelmalik says:
စက်တင်ဘာလ 15, 2013 မှာ 12: 39 နံနက်
UTM Geo မြေပုံ
Cool Sticky Notes မှတ်စုကောင်းတဲ့ Notepad Text Reminder Chits
ဝိုင်ဖိုင်စကင်နာ & Analyzer - ဘယ်သူအသုံးပြုသည်ကိုရှာဖွေသည် ...
Retro Filter - Vintage Camera Effects ဓါတ်ပုံများ